Maro adag Roving - Shiinaha Wuqiang County Huili Maro
Maro adag screen window
Laabi Screen Window
Maro adag Is-koolo
PVC daahan Maro adag dun
Maro adag dun
Maro adag Roving
Maro adag Maro
Maro adag jartey Strand Mat
Polyester Screen Window
screen suuqa kala ammaanka
Maro adag tuug tooska ah dahaarka leh kula qiimaynta silane ku salaysan oo la jaan qaada cusbi roodhida, cusbi vinylalkohol, iyo cusbi epoxy. Waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro qalabka, ulihii kala duwan iyo profiles.
1. fuzz yar inta lagu jiro ka baaraandegidda
2. Fast qoyan-baxay oo qoyan-dhex
3. firidhsan fiber Good iyo guryaha sare farsamo farcan
4. qaybood waxaa si fudud u furay si ay u soo bandhigaan filaments ay la yar ka shaqeeya
5. xoog High
6. Xitaa heshay xiisad
7. heerka Low of abrasion qalalan badan dhibcood xiriir creel
isticmaalka Main ka mid ah soo saaridda of tuubooyinka FRP ee dhexroor kala duwan, tuubooyinka-kar gudbida batroolka, weelasha cadaadis, haamo biyaha lagu keydiyo, iyo, qalabka madhxiya sida dhengedihii utility iyo tube madhxiya.
Maro adag Roving - Waxyaabahani waa darafyadiisa kala duwan ee Maro adag joogto ah (splice free) dun buuxieyey baaraandegi gal duntu steel awoodda sare. Xoojiyo galaas Specialty waa adag ee dabiiciga ah iyo waxay u baahan yihiin xaalado processing saxda ah. Alaabta Tani waxaa laga heli karaa in fiiloyin sida Kevler oo kale ARAMIDS. Isticmaalkooda aasaasiga ah waa in silig ka suuroggalaan baabuurta sida wax asaasiga ah iyo fiilooyinka isgaarsiinta. Xoojiyo Maro adag bixiyaan tayada silig & cable suuqa sare, waxqabadka sare iyo kharash-ool ah.
Maro adag dambana waa nooc ka mid ah fiber galaas gaar ah in iska caabin ah kartaa nabaad guurka of walxaha xumadoodu sida sibidhka. Waxaa loo adeegsan karaa in la xoojiyo cement (GRC), gypsum iyo qalabka kale ee ka imanba iyo organic, oo ay tahay ugu fiican ee steel iyo asbestos in aan load-dhalista qaybaha cement beddeli. waxqabadka Product waafaqsan heerarka qaranka iyo warshadaha, iska caabin alkali si ay ula kulmaan Maraykanka PCI (Prestressed Society la taaban karo) iyo shuruudaha International GRC Association.
Direct Roving jaanqaadi Beeyada thermosetting, sida caag roodhida, Ester vinylalkohol, epoxy iyo Beeyada phenolic.
Direct Roving waxaa si balaadhan looga isticmaalaa widing buuxieyey iyo Pultrusion, soo saara tuug leh tolmo wanaagsan iyo dhar multiaxial. Codsiga leeyihiin tuubooyinka FRP, weelasha cadaadis, biruhu, taangiyada kiimikada iyo wixii la mid ah.
waqti Post: Apr-28-2018
Jieguan Wuqiang County Hengshui, Hebei, Shiinaha.